February 2021 – Let Pan Daily
Let Pan | February 28, 2021
ရွှေမန္တလေး ဘာကြောင့် ဒီနေ့ အောင်မြင် ခဲ့လဲ? ဒီနေ့ ဖြစ်စဉ် ကို ပြောပြ ပါ့မယ် ရွေမန်းမြို့က အကြီးဆုံး သပိတ် စစ်ကြောင်း ဖြစ်တဲ့ Medical နှင့် Engineer ကို သူတို့ အညှိုး ထားနေတာ ကြာပါပြီ။ ခုတင် ၃၀၀ သင်ကြားရေးဆေးရုံ | သွားဘက်ဆိုင်ရာ
သန္တာဗိုလ်ကတော့ သရုပ်ဆောင်အဖြစ်ရော မော်ဒယ် အဖြစ်ပါ အနုပညာ လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ အချိန်အတော်ကြာလျှောက် လှမ်းလာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူပရိသတ်တွေနဲ့အတူ တစ်သားတည်း ရပ်တည်နေတာဖြစ်ပြီး လှုပ်ရှားမှု ပုံလေးတွေ ကိုလည်း လူမှုကွန်ယက် ဖေ့ဘွတ် စာမျက်နှာထက်မှာ တင်ပေးလေ့ ရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေဟာလည်း တစ်ရက်ပြီး တစ်ရက် အားကောင်းလာနေတာဖြစ်ပြီး အနုပညာရှင်တွေ
ပရိသတ်ကြီးရေ.. နန်းဆုလို့ အားလုံးက ချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့ အဆိုတော်သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေး နန်းဆုရတီစိုးကတော့ အနုပညာလောကမှာ ပရိသတ်အခိုင်အမာနဲ့ ထိပ်တန်းကနေ အောင်မြင်နေသူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်..။ နန်းဆုလေးဟာ ယခုလတ်တလောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေ နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ပြည်သူတွေ နဲ့အတူ ပူးပေါင်းကာ လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေ မှာ အင်တိုက်အားတိုက်ကြိုးစားပါဝင်နေသူလေးလည်း ဖြစ်ပါတယ်နော်..။ ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျလမ်းပေါ်ထွက် လှုပ်ရှားမှုတွေ ပြုလုပ်နေသလို
ဒီနေ့ ဗားကရာလမ်း ဆန္ဒပြပွဲမှာမနက်တစ်ပိုင်းလုံး ကတော့ ဆန္ဒပြသူတွေ လုပ်ကြတာက လူစုပြီး အော်မယ်။ ရဲတွေ ပြေးတက်လာရင် ပြေးမယ်။ ရဲတွေ ငြိမ်သွားရင် လူပြန်စုမယ်။ ဆက်အော်မယ်။ ဒါကိုပဲ ထပ်ခါ ထပ်ခါ လုပ်သွားတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ့် လူထု ခံစစ် (defense) ကို စ တာက ညနေ
လတ်တလောမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေအရပ်ရပ်ကြောင့် ပြည်သူလူထု အနေနဲ့ တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေအစွမ်းကုန်ပါ၀င်လှုပ်ရှားနေကြကာ ငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့လုပ်ဆောင်နေကြတာကို အားလုံးလည်းသိမြင်ကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်…..။ အခုလိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အခြေအနေအတွင်းမှာ အနုပညာရှင်တွေ အနေနဲ့လည်း ပြည်သူထဲက ပြည်သူတွေပဲဖြစ်တာမလို့ တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ ပရိသတ်တွေနဲ့တစ်သားတည်းရပ်တည်ကာ လှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာဆိုရင်လည်း လူထုလှုပ်ရှားမှုကြီးဟာ တစ်ပြည်လုံး အတိုင်းအတာအနေနဲ့ ပါ၀င် လှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပြီး ဦးခင်လှိုင်တစ်ယောက်လည်းရဲရဲဝံ့ဝံ့လုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ လူထုလှုပ်ရှားမှုကြီးဟာအခုဆိုရင် ၂၈ရက်မြောက်နေ့ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး အခက်အခဲတွေများစွာ ရှိနေတာကိုလည်း
ပရိသတ်ကြီးတို့ရေ အသံချိုချိုသာသာ အေးအေးလေးနဲ့ အဆွေးသီချင်းတွေ ကို အလွမ်းဓာတ်ခံ ပါပါ သီဆိုပြီး ပရိသတ်တွေအားပေးထောက်ခံမှုကို အပြည့်အဝ ရရှိထားတဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော် ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းကိုတော့ အားလုံးသိကြမယ် ထင်ပါတယ်။ သူမကတော့ သီချင်းဆိုတဲ့ အပိုင်းကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်ယုံသာမက ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင် အနေ နဲ့လည်း တခေတ် တခါက အနုပညာလောကမှာ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ သူတစ်ဦးလည်း
မြန်မာပလာဇာမှာ ဆန္ဒပြလူငယ်တွေနဲ့ ရဲတွေကြား အနုပညာရှင် ဦးဇင်ဝိုင်းက ဝင်ရောက် ညှိနှိုင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ “အခုဆန္ဒပြနေတဲ့ လူငယ်တွေက အကြမ်းဖက်သမားတစ်ယောက်မှမပါပါဘူး ဘာလက်နက် မှလဲ မပါပါဘူး ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေတာ ပါရဲမှုး တို့ဘက်ကလဲ ဆောင်ရွက်ရမယ့် ဝတ္တရား ရှိတယ်ဆိုတာသိပါတယ်”ဆိုပြီး မြန်မာပလာဇာမှာ လူငယ်တွေ နဲ့ ရဲတွေကြား ဝင်ရောက်ညှိနှိုင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ လူငယ်တွေကိုလဲ “ ဓါးတွေ
Self defense tip နည်းနည်းပေး ပါ့မယ်။ ဒီနည်းတွေ သုံးဖို့ အားကောင်းဖို့မလိုပါဘူး။ 1. လက်သီးနဲ့ မေးစေ့/ပါးကို မထိုးပါနဲ့။ လက်သီးမဆုပ်တတ်ရင် လက်ကျိုး တတ်ပါတယ်။ လက်ချောင်းကြားထဲ သော့ထည့်ဆုပ်တာမျိုးလည်း မလုပ်သင့်ပါဘူး။ 2. လက်ထဲက တခုခုကို ကိုင်မယ် ထုမယ်ဆို လက်သီးဆုပ်ပြီးကိုင်ပါ။ (လှံပစ်ရင် လှံကိုကိုင်တဲ့ပုံမျိုး) 3. နောက်တခုက
ပရိသတ်ကြီးရေ……ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင် မင်းသားချောလေး မင်းမော်ကွန်းကတော့ ဆယ်စုနှစ်ကျော် တိုင်အောင် အနုပညာလောကမှာ အောင်မြင်မှုတွေ များစွာနဲ့ ရပ်တည်နေတဲ့အပြင် သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ မိသားစုဘဝလေးကိုပါ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သူပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်းမော်ကွန်းဟာ ဗီဒီယိုဇာတ်ကား အများအပြားတွင် သရုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး သူရဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ် ကားကြီးတွေကလည်း ပရိသတ်တွေရင်ထဲကို ထိမိစေခဲ့တဲ့ အတွက် အကယ်ဒမီဆုကိုပါ ဆွတ်ခူးရရှိထားတဲ့ မင်းသားတစ်လက် ဖြစ်ပါတယ်။ မင်းမော်ကွန်းဟာ
အဆိုတော်ကောင်းကောင်း ကတော့ အသံအေးအေးလေးနဲ့ သီချင်းလေးတွေကို ကိုယ်တိုင်ရေးသားသီဆိုသူ တစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုတွေကို ဆယ်စုနှစ်ကျော်တိုင်အောင် သိမ်းပိုက်ရရှိထားတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လူထု လှုပ်ရှားမှုတွေမှာလည်း ဂီတမောင်နှမများနဲ့အတူ တက်တက်ကြွကြွပူးပေါင်း ပါဝင်နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်နဲ့လူငယ်တွေရဲ့ အနာဂတ် အတွက် ကျရာအခန်းကဏ္ဍကနေ ပါဝင်အားဖြည့်ကူညီပေးနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လမ်းပေါ်ထွက်ကာ